Musharrax Madaxweyne Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni oo Casho Sharaf Ku Casumay Xildhibaanadsa Laga Soo Doorto Gobolada Sanaag iyo Haylaan.(Sawiro) – Radio Daljir
Janaayo 5, 2019 1:07 g 0
Musharrax Madaxweyne Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay 04 Jan, 2019 waxa uu kulan casho sharaf ah ku casumay xildhibaanada laga soo doorto gobolada sanaag iyo haylaan ee ka tirsan baarlamaanka Dawladda Puntland.
Munaasabadda casho sharafta ah oo ka qabsoontay hotel AJJ garoowe ayaa waxaa sidoo kale kazoo qayb galay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka, aqoonyahay, siyaasiyiin iyo dhallin yaro oo kazoo jeeda gobolkaas.
Musharrax Siciid Deni ayaa si diiran xildhibaanada uga mahad celiyey sida wanaagsan ee ay munaasabadda usoo ajiibeen, wuxuuna la qaatay kulan gaar ah isagoo uga mahad celiyay sida geesinimada leh ee ay uga qayb qaateen isbeddelka cusub ee ka dhashay hogaanka kala duwan ee baarlamaanka Puntland.
Sidoo kale wuxuu ku adkeeyey inay u diyaar garoobaan isbeddelka looga baahan yahay in lagu sameeyo hogaanka sare ee Puntland, si looga gudbo marxaladda adage e waqtiyadii danbe kusoo kordhay guud ahaan xaaladaha kala duwan ee Puntland.
Ololaha Doorashooyinka Puntland - Deni 2019 36 Wararka 17858